Nche - iSearch
Ụwa juputara n'omume ... na ihe ize ndụ. Karịsịa mgbe ụmụntakịrị na-amalite inyocha ụwa ha. Mgbe ụfọdụ, ọ dị ngwa ngwa na ndị nne na nna na-esiri ike ịgbaso ha. Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ n'oge ọ na-eto eto, mgbe ụmụ ntakịrị na-adị ngwa ngwa na ha na-eme ka ụlọ ahụ ghara ịdị ize ndụ. Ọ bụ ezie na onye na-adịghị eche nche maka oge dị mkpirikpi, ọ na-ahụrịrịrịrịrị: Otu mkpọtụ na mkpuchi na-akụda ite ahụ n'ala. Ntuhie dị obere dị otú a ga-eme ka ị dị mma ma tinye ebe ọzọ na-esote n'ebe nchekwa. Ma, e nwere ọnọdụ ndị jọgburu onwe ha na ị gaghị achọ iche n'echiche. Ya mere, a na-agwa ndị nne na nna ka ha na-eche banyere nchekwa na ụlọ ozugbo ọ bụla o kwere mee.
Ya mere, ọ dịghị ihe ọ bụla dị njọ n'ilekọta nwa ahụ n'oge ime ime. Ọbụna na nhazi nke ụlọ akwụkwọ ahụ, dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịchebe nchebe anya mbụ. Ntinye nkedo dị na ọkwa dị iche iche na atụmatụ. Ebe kachasị ebe niile bụ ndị na-etinye aka na nkedo ma jikọta ya na mpempe akwụkwọ ntanye azụ. Ha na-emechie oghere site na usoro mgbanwe, nke dịka usoro a na-apụghị imeri n'ihi obere ụmụaka. Maka ntọala ndị na-adịkarịghị ma ọ bụ na-ejighị ya, mkpuchi mkpuchi bụ ndị kwesịrị ekwesị na-etinye n'ime ogwe ya ma enwere ike wepu ya site na enyemaka nke plọg ma ọ bụ isi. Dị ka ọ dị, ihe na-adịghị mfe ma ọ bụ ihe na-abaghị uru na nkwụnye ọkụ kwa ụbọchị na mkpofu nke ngwa eletrik, Otú ọ dị, na-etinye nkwụnye ụkwụ. N'ebe a, a na-ejikọta nwata nchedo ozugbo n'ime ụlọ ahụ. Ebe ọ bụ na a ghaghị iwepu ụlọ kpamkpam maka ntụgharị, ọrụ na ogwe ahụ ga-eme naanị site na ọkachamara. Nke a bụ ntakịrị nsogbu na nke kachasị mma maka iwu ọhụụ maọbụ ọ bụrụ na nrụzigharị ahụ amalitela.
Ọ bụrụ na ụlọ niile anaghị ekpuchi ya, ndị nne na nna kwesịrị ịlele ụlọ ha maka ebe ndị ọzọ nwere nsogbu. Iji gbochie steepụ steepụ, a na-atụ aro ya ka e nwee steepụ dị elu na mgbọrọgwụ pụrụ iche. A na-ejikarị steepụ na-ekpuchi oghere ma ọ bụ kpuchie ya ma nwee ike imeghe ya. Ha na-enwe pan ma ọ bụ ihe nkedo nke a na - eji osisi ma ọ bụ ígwè eme ihe ma nwee ike ịgbanwe nke ọma na obosara nke steepụ ma ọ bụ agbatị site na spacers na obosara kwesịrị ekwesị.
Ọbụna tebụl kọfị pụrụ ịdị ize ndụ maka ụmụaka. Nke a bụ, mgbe ụmụ ọhụrụ na-amalite ịmalite onwe ha ma ọ bụ mee nyocha mbụ nke nnwere onwe free. A ga-enye gị ebe nchekwa tebụl gị na ndị nchebe na-ekpuchi ihu mmiri iji gbochie nnukwu mmerụ ahụ n'isi nwa na-ahụ n'anya mgbe ọ na-ada. Ma e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-enyere aka mee ka ụlọ ghara nchekwa maka ụmụaka. A na-etinyekwa ngwaọrụ nchekwa nchekwa dị iche iche na nsụgharị dị iche iche ma ọ bụ na-ekpuchi stovu. N'ọnọdụ ọ bụla, a ga-etinye mgbidi na shelves na mgbidi ka ha ghara ịda mgbe ha na-arịgo ma ọ bụ na-adọta nwa.
Ma obughi nani ebe ndi mmadu apughi ime ka ha di ndu nwere ike buru ihe ize ndu nye umuaka. N'ezie, nke a na-emetụta akụkụ ndị ọzọ nke ndụ. Nchebe nke nwatakịrị, karịsịa na njem, bụ ihe dị taa. Ọ bụ ezie na a chọrọ mbido nwa nwa ebubo na Germany na 1993, ọ bụ ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche ugbu a iji bufee nwatakịrị na-adịghị edozi ya n'ụgbọala ahụ. Otu ihe a gbasara oche oche na okpu agha. Nkwa ha abanyela n'ime anụ ahụ na ọbara mmadụ niile, ọ bụ ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche. Ụkpụrụ nchedo siri ike na-eme ka o doo anya na ụmụaka dị njikere nke ọma ma ọ bụrụ na ha nwere nkwekọrịta taa. Mana n'ezie, enwerekwa iche iche na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị a ga-echebe ụmụaka na ụzọ. Ndị a anaghị echebara nchekwa ahụ echiche, kamakwa nkasi obi na nkwụsị kwa ụbọchị. Onye ndu anyị na-eweta uru ya na ihe ọghọm ya na ìhè.
N'èzí & Maa ụlọikwuu
Gịnị bụ nọmba mbụ? Nọmba mbụ dị adị ga - adị adị, ọ ga - adịgide. Ọbụna ndị Gris oge ochie na-adọrọ mmasị ...
Nri & Nlekọta isearch - October 4, 2017 0
Mgbe ọ na-abia na ịme ihe, ụmụ ọhụrụ na-enwekarị obi ụtọ. Na mmiri na-ekpo ọkụ, obere aka nwere ike ikwuda na ...
Nri & Nlekọta isearch - October 3, 2017 0
Inyere ụmụ ọhụrụ nri na mmiri ara ehi tupu ị zụta nwa ahụ ihe niile, ahụ gị amalitelarị ịrụ ọrụ ...
Nri & Nlekọta isearch - October 2, 2017 0
Zụta akwa akwa - yabụ obere obere mmekọrịta gị ga-akpọnwụ Ọmụmụ nwa bụ maka ọtụtụ ndị mmadụ obi ụtọ zuru oke na enwere….
Nri & Nlekọta isearch - September 25, 2017 0
Ngwadogwu bụ ngwá ọrụ nke ụlọ nke na-aghọwanye na ọtụtụ ebe. A na-eji ya maka ịmịnye nke karama na pacifiers.Mittlerweile es ...
Na-agbanwe agbanwe table radiant okpomọkụ
Nri & Nlekọta isearch - September 21, 2017 0
Agbanwe okpokoro okpokoro na-adịkarị mkpa na ezinụlọ na ụmụ ọhụrụ ma ọ bụ obere ụmụaka. Ọ bụ onwe onye doro anya maka ndị nne na nna na ọ bụ obere ụmụ nwoke ...
193FansỌ masịrị m
Oge ntụrụndụ na njem isearch - October 5, 2017 0
Maka ụmụ ọhụrụ, ọ dịghị ihe ọ bụla dị mma karịa ịgba ọsọ na mmiri. A na-agbagharị nwa bụ kpọmkwem maka ...
Oge ntụrụndụ na njem isearch - October 1, 2017 0
Karịsịa ndị nne na nna na-eto eto na-enwe ekele maka njem dị elu karịsịa. Ọ bụ ugbu a bụ ihe bụ isi dị mkpa maka ndụ nke na-agwụ ike kwa ụbọchị na nwa. Ma n'afọ mbụ nke ndụ ...
Oge ntụrụndụ na njem isearch - September 30, 2017 0
Ọ bụrụ na nwatakịrị si n'aka nwa, mgbe ahụ, a chọrọ ngwaọrụ ọhụrụ. Ka ọ dị ugbu a, ihe e ji ebu ụmụaka bụ obere ma ọ bụ na ọ bụ ...
Oge ntụrụndụ na njem isearch - September 29, 2017 0
Akpa ihi ụra ma ọ bụ akara ụkwụ maka eji eme ihe n'èzí aghọwo ihe dị oké mkpa n'ọhịa nke ngwa-agha. Ha na-eje ozi dị ka onye nnọchianya maka ...
Oge ntụrụndụ na njem isearch - September 18, 2017 0
Ọ bụrụ na ndị nne na nna, ma ọ bụ ndị na-ahụworị ebe ahụ, ajụjụ ahụ na-ebili ma nwatakịrị ọ dị mkpa ma ihe nlereanya kachasị mma.
Ụmụaka karịsịa na-etinye oge ka ukwuu n'oge ha na-ehi ụra. Ha dinara n'ihe ndina ruo 20 awa. Ya mere, ọ dị mkpa ịzụta obere akwụkwọ ntụrụndụ kwesịrị ekwesị. A na-ezubere nduzi a iji nye nkọwa, ịkụziri gị gbasara ngwaahịa kwesịrị ekwesị, iji gosi ụdị dị iche iche, na igosi gi ihe ...
Wetụle Ahụhụ Nwa A Na-enye Ọtụtụ Uru Ihe ndina bu ebe kachasi nma ihighari n’ime onwa ato mbu. Na mgbakwunye na akwa n'akụkụ na bassinet, akwa akwa na-enye ọtụtụ uru. N'adịghị ka akwa dị n'akụkụ, nke edoziri n'akụkụ akwa ...
Children oche oche
Oche oche ụmụaka - arụ ọrụ ma maa mma andmụaka na-etolite ma chọọ akwa eji arụ ọrụ. Ọ bụụrụ ndị nne na nna ihe ịma aka na-aga n'ihu mgbe niile ịchọta arịa ụlọ dabara adaba na mmepe nwata. Karịrị oche ahụ ga-adabakọrịrị na ogo nwatakịrị ahụ. Oche ...
N'oge na-adịghị anya, ọ ga-adị ugbu a ma ọgbọ ọzọ ga-aga n'okporo ụzọ. Ọtụtụ ndị nne na nna na-atụ egwu ọrụ ọhụrụ ahụ, ma enwerekwa obi ụtọ na atụmanya. N'ihi na ndị nne na nna ahụ nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme ma yabụ ka a ga-edozi ụlọ ndị a ...
akwụkwọ isearch - April 7, 2020 0
nche isearch - October 26, 2017 0
nche isearch - September 24, 2017 0
ogwe aka floats
nche isearch - September 20, 2017 0
nche isearch - September 13, 2017 0
nche isearch - September 9, 2017 0
Are bụ onye isi ebe a na-ewu ihe owuwu! Site na onye na-ebugharị wiil LENA Worxx ị nwere ike n'ụsọ osimiri, yana n'ụlọ, na ebe a na-elekọta ụmụaka ma ọ bụ sandpit, gị ...
Coral oké osimiri coral
aki oyibo mmanụ
123...281 peeji nke 28